Global Voices teny Malagasy » Etazonia, Rosia: Miady hevitra momba ny ‘Mpitsikilo 2.0’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Jolay 2010 3:11 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika Candy
Sokajy: Amerika Avaratra, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Etazonia, Rosia, Ady & Fifandirana, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Lasa lohahevitra ifotorana amin'ny aterineto Rosiana amin'ity herinandro ity ny fisamborana  [EN] olona 11 tamin'ny 29 Jona, izay voalaza fa mpikambana ao amina tambajotrana mpitsikilo Rosiana (antsoina hoe “Mpandika lalàna ” [EN] ao amin'ny tatitra nataon'ny FBI) . Nanintona be ny fifantohan-tsaina ilay olo-malaza Anna Chapman  [EN], “mpampiasa vola amina fandraharahàna” 28 taona. Nizarazara tamin'ny làlana maro ny adihevitra: fanesoesoana ireo “mpitsikilo” sy ireo manampahefàna Amerikana; ny fandinihana ny vokatr'ireo amin'ny fifandraisana Amerikana-Rosiana; fiadian-kevitra momba ireo “data” sy sarin'i Chapman amin'ny aterineto; ary ny ho avin'ireo tetika miafina ambany fepetran'ny “fangaraharana” virtoaly tanteraka, apetrak'ireo media vaovao.
Na dia nalaza aza ilay lohahevitra, tsy dia maro ireo loharanon-tatitra mitohy momba ilay tantara: ny Sampan-draharaha Rosiana Voice of America  no hany nanome tatitra mivantana miaraka amin'ireo tatitra avy any amin'ny fitsaràna  [EN] amin'ny alalan'ny vondrona LJ -ndry zareo (golos_ameriki ) ary Twitter .
Ireo tamin'ireo mpitoraka blaogy naneho hevitra voalohany mikasika ireo fisamborana i nl mpampiasa LJ , izay namoaka “scans”-na taratasy fitorian'ny FBI ary nanome lohateny ho an'ny lahatsorany hoe “Miaraka amina mpitsikilo toy itony, iza no manangam-pahavalo? ” Sady nanesoeso ireo fiaikena nataon'i Amit Kachhia-Patel, mpiasan'ny FBI, ilay mpitoraka blaogy amin'ny fampitahàna ny lahatsoratra amin'ny fahadisoam-panantenana naterak'ilay sarmihetsika ratsy kalitao “Spies Like Us ,” no nanesoeso ihany koa ny fahataràna ara-teklonojian'ireo voalaza ho mpitsikilo.
Nanohy i fyysik [RUS], amin'ny firesahana momba ny fomba fampitàna hafatra miafina amin'ny alalan'ireo sary nasiam-panamboarana  [EN]:
Mety ho lasa manampahaizana toy ireo mpiasan'ny SVR ireo manampahaizana manokana ao amin'ny FBI, ary tamin'ny 2005 dia nianatra namoaka ny EXIF  [EN] sy zava-dehibe hafa avy any anatin'ny JPG.
Ny tena endrika “surréaliste”-n'ny fomba fanaon'ny “mpitsikilo” ary indrindra ny antsipiriany dia mampahatsiaro  [RUS] an'ireo mpitoraka blaogy ny tranga iray tamin'ny 2006, fahatratrarana “fikambanana mpitsikilo” hafa tany Môsko, izay nantsoina hoe “Spy Stone story”  [EN].
Fanesoesoana hafa koa ny firesahana momba an'i Stirlitz  [EN], mpitsikilo sôviety noforonina tamin'ny Ady Lehibe faha-2 tany Alemana Nazi. Nahita famelabelarana mifandraika kokoa amin'ny vanimpotoana  i e-dikiy, mpampiasa LJ [RUS], ho an'ity tantara malaza ity:
Iray tamin'ireo mpitoraka blaogy niady hevitra momba ireo akon'ny fisamborana  [RUS] Ivan Kurilla, mpahay tantara momba ireo fifandraisana Amerikana-Rosiana, (fantatra amin'ny solonanarany LJ hoe alliruk):
I Anna Chapman, kintan'ilay fahafaham-baraka momba ny mpitsikilo, dia lasa votoatim-pandinihana isankarazany, fankahalàna, ary fiderana aza. Nisy vondrom-piarahamonina LiveJournal “Free Anna Chapman ” [EN] noforonina (na dia tsy nahasarika mpankafy maro aza izany).
I feeling_of_void, mpampiasa LJ, dia nandinika  ny lazan'ny domdot.ru vohikalan'i Chapman , vohikalam-pikarohana fanaka fanao an-tokantrano. Araka ireo antontan'isa misokatra, tsy dia fahombiazana loatra n y vohikala domdot.ru , miaraka amina mpampiasa 1000 isan'andro monja, izay tsy azo ampitahaina amin'ireo mpifaninana anatin'izany sehatra izany any Môsko. Nilaza ilay mpitoraka blaogy fa poak'aty avokoa ireo tetik'asa “fandraharahana” nataon'i Chapman tamin'ny aterineto.
Ny raharahan'i Anna Chapman sy ny ‘mpiara-miasa’ aminy Mikhail Semenko dia maneho ny endrika vaovaon'ny “Mpitsikilo” – “mpitsikilo 2.0.” Samy nampiasa tambajotra ara-sosialy izy roa (LinkedIn (mombamomba an'i Chapman  [EN], mombamomba an'i Semenko  [EN]), Facebook, Odnoklassniki), samy nanana fiainana virtoaly ary nizara sary azo namantarana [EN] azy ireo. Tao amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny fanadihadiana an'i Chapman tamin'ny YouTube  [RUS] dia nanontany ilay mpampiasa Slinqshot:
Mandravaka ny fiovàn'ny maodely tamin'ireo asa miafina tany amin'ny tontolon'ny media sosialy izany fanontaniana izany. Araka ny nametrahan'ilay  [RUS] filozofy Alexander Morozov azy (fantatra amin'ny solonanarana LJ hoe amoro1959), raha mieritreritra an'i Stirlitz voatonona tetsy ambony (taratry ny sehatra mpitsikilo Sôvieta/Rosiana):
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/08/6983/
 ny fisamborana: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/28/AR2010062805227.html
 Mpandika lalàna: http://en.wikipedia.org/wiki/Illegals_Program
 tatitra avy any amin'ny fitsaràna: http://community.livejournal.com/golos_ameriki/312502.html
 Miaraka amina mpitsikilo toy itony, iza no manangam-pahavalo?: http://nl.livejournal.com/942508.html
 Nanohy : http://fyysik.livejournal.com/1534736.html
 fomba fampitàna hafatra miafina amin'ny alalan'ireo sary nasiam-panamboarana: http://en.wikipedia.org/wiki/Steganography
 Nahita famelabelarana mifandraika kokoa amin'ny vanimpotoana: http://e-dikiy.livejournal.com/2276936.html
 niady hevitra momba ireo akon'ny fisamborana: http://alliruk.livejournal.com/235675.html#cutid1
 mombamomba an'i Chapman: http://www.linkedin.com/in/chapmananna
 mombamomba an'i Semenko: http://www.linkedin.com/in/mikhailsemenko
 sary azo namantarana: http://gawker.com/5575882/the-facebook-adventures-of-accused-russian-spy-mikhail-semenko
 fanadihadiana an'i Chapman tamin'ny YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=o0Cixl20D80&feature=related